I am sailing ….I am sailing….home again….
Cross the sea….I am sailing…..stomy water….
To be hear you…to be free…
I am flying…I am flying…likeabird….
Cross the sky…I am flying…passing high clouds
To be with you….to be free….
Can you hear me ….can you hear me…
Throgh the dark night…faraway
I am dying ..for ever trying…
To be with you…who can say…
ကျနော်ရန်ကုန်မြေကထွက်လာတာ ဆယ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီကျနော်ဟာ သင်္ဘောပေါ်မှာပျော်နေတဲ့ရေပျော်တစ်ယောက် ရောက်တဲ့အရပ်မှာဆင်းပြီး ပျော်လိုက်မယ်၊ လက်ထဲမှာငွေရှိနေရင် လုပ်ချင်တာကိုလုပ်လိုက်ရမှ၊ ကုလားကြီးနဲ့သခွားသီး ကိုနောက်ဆုံးအင်းစိန်ထောင်မှာထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ခဲ့တယ်၊ကျနော်နဲ့ဆုံခဲ့တုန်းကသူတို့လွတ်ဘို့နှစ်နှစ်ကျန်သေးတယ်……
ရီယိုဒီဂျနေရိုးမြို့စွန်မှာကျူးကျော်ပျံကျနေတဲ့ရပ်ကွက်ကြီးတွေရှိတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကဒီရပ်ကွက်တွေကိုမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်……ဆင်းရဲသားလူထုရဲ့ဆန္ဒမဲကိုအပေးအယူသဘောမျိုးနဲ့ရခဲ့လို့ နေထိုင်ခွင့်ရနေတယ်……
ဘရာဇီးလ်ခလေးလူငယ်တွေဟာဘောလုံးကိုအရူးအမူးစွဲလန်းနေကြတယ်……ကျနော်နေတဲ့ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ကခလေးတွေ မိုးလင်းမိုးချုပ်လမ်းပေါ်မှာဘောလုံးဘဲကစားနေကြတယ်၊သူတို့စိတ်ထဲမှာဘောလုံးကန်တော်ရင်သူဌေးဖြစ်မယ်။သူတို့ရဲ့ဟီးရိုးတွေ က ဘရာဇီးလ် လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတွေဘဲ…..
ဘရာဇီးလ်ဟာဘောလုံးသမားစက်ရုံလို့ဆိုရလောက်အောင်ဘောလုံးကန်တော်တဲ့သူတွေသြတိုက်နေတာဘဲ။နောက်ရှိသေးတယ်။ ကြက်တွေလည်းပေါတယ်၊အကြောင်းရင်းကစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေလို့ပေါ။့ဆင်းရဲလို့ကြက်တွေများတဲ့ကျနော်တို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာသင်္ဘောသားတွေနိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအရာရှိကြီးတွေခြေရှုပ်နေတာဘဲ….
ကျနော့်မှာငွေရွင်နေတော့ ညိုချောလေးက သဘောကောင်းနေတယ်….. သူနဲ့တွဲနေတာတော်တော်ကြာသွားပြီ။ သံယောဇဉ်ဖြစ်ချင်သလိုလို ဒါပေမယ့်လိုင်းပေါ်ကကြက်ကိုချစ်လို့မဖြစ်ပါ။ ဖါခင်ရင် ဖင်ခါသွားလိမ့်မယ်။သံယောဇဉ်တွေဖြတ်ပြီး မရောက်တာကြာတဲ့ရန်ကုန်မြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်အုံးမှ……။
သူတို့တွေရှိတဲ့ ပဲခူးနဲ့တောင်ငူကိုအရင်သွားမယ်။ အဖေနဲ့အမေရှိတဲ့မော်လမြိုင်ကိုနောက်မှသွားတော့မယ်..
ကျနော်မျက်စိမှားတာလား၊ လူမှားနေတာလား၊ ရန်ကုန်မှာအတူတူနေခဲ့ကြတဲ့ကုလားကြီး မုတ်ဆိတ်မွှေးနှုတ်ခမ်းမွှေး တွေနဲ့ ခေါင်းမှာဗလီဦးထုပ် ဆောင်းထားတယ်။ အဖြူရောင်ဝတ်ရုံရှည်ကြီးဝတ်ထားတယ်…..ဟာဂ်ျနှစ်ကြိမ်တောင်ရောက်ပြီးခဲ့ပြီ…..
နှစ်ထပ်ကွမ်းဟာဂျီကုလားကြီး…..သူ့မျက်နှာသွင်ပြင်အေးချမ်းနေတယ်…အားလုံးဟာအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အလိုတော်အတိုင်း ပါဘဲ……ကောင်းတာလုပ်မယ်၊လူတွေအပေါ်မေတ္တာထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်၊လူတွေအပေါ် မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာဘဲ……
အရင်ဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တာတွေကိုနောင်တမရနေပါဘူး……ဒီလိုဆိုးခဲ့လို့လည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က အမြင်မှန်တွေ ပြန်ရအောင် လမ်းပြပေးခဲ့တယ်လို့ငါယုံတယ်…..
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုငါတစ်ယောက်တည်း သိတာထက် လူအများကြီး သိနားလည်အောင် ငါရှင်းပြနေတယ်….ငါ့ဘ၀ကိုဘာသာရေးထဲမှာမြှပ်နှံလိုက်ဘို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ…..ငါတို့အသက်တွေမငယ်တော့ဘူး။မင်းလည်း အရင်တုန်းကစိတ်တွေဖျောက်လိုက်တော့……လူတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးမလုပ်ပေးနိုင်ရင်တောင်မှကိုယ့်အတွက်ထာဝရ အေးချမ်းတဲ့နေရာကိုရှာပါ……။သခွားသီးဆီမင်းသွားလိုက်ပါအုန်း…..သူလဲအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေပြီ….
ကျနော်အရမ်းအံ့သြရပါတယ်၊ အရင်ကသိခဲ့တဲ့ကုလားကြီး၊ဒီနေ့ကုလားကြီးအရမ်းကိုကွာနေပြီ၊ ကုလားကြီးအေးချမ်းတဲ့ နေရာရှာတွေ့သွားပြီ………..
ကျောင်းဝင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ရင်ထဲအေးချမ်းသွားပါတယ်…..စိမ်းစိုနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေအကာအကွယ်ကြောင့်ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်မခံစားရပါ…..ဓမ္မာရုံကြီးပေါ်ကိုလှမ်းတက်ရင်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာပိုပြီးအေးချမ်းစေပါတယ်။ကိုရင်၊ဦးဇင်းအပါး နှစ်ဆယ်၊ ယောဂီအယောက်နှစ်ဆယ်လောက်ဟာညီညီညာညာအတန်းလိုက်ထိုင်ပြီးဝိပဿနာနည်းနဲ့တရားမှတ်နေကြပါတယ်….
အသက်ရှုနေတဲ့အသံကလွဲပြီးဘာသံမှမကြားရပါ။ ဘေးနားမှာ ကိုယ်တော်နှစ်ပါးက ကြီးကြပ်ပေးနေတယ်။ရှေ့ဆုံးမှာ ကိုယ်တော်ကြီးတစ်ပါးထိုင်နေရင်းတရားမှတ်နေတဲ့ကိုယ်တော်တွေကိုဖြစ်ပျက်တရားဟောကြားနေတယ်၊ဒီဘုန်းကြီးအသံဟာ ကြားနေကျ အသံဘဲ….မျက်နှာကိုသေသေချာချာကြည့်လိုက်တော့ကျနော်အရမ်းအံ့သြရပါပြီ..ကျနော့်သူငယ်ချင်း စောသာခွားခေါ် သခွားသီးခေါ် ရွှေကရင် ခေါ် ဦးစိတ္တ။ ကျနော်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတာအထူးအဆန်းတွေဘဲတွေ့နေရလို့ အခြားဂြိုလ်ကို ရောက်သွားပြီလားလို့တောင်ထင်မိပါတယ်…..ကုလားကြီးလည်းဗလီဆရာ၊မောလ၀ီဖြစ်နေပြီ။ ယခုသခွားသီးလဲဦးစိတ္တဘွဲ့အမည် ရှိသော ဘုန်းကြီးဖြစ်နေပြီ။ကျနော်လိုသာမန်ပုထုဇဉ်တွေထက်မြင့်သောနေရာကိုရောက်နေကြပြီ…..
ကျနော်ဦးစိတ္တကို ဦးချလိုက်ပါတယ်၊ကြာဖူးပုံသဏ္ဍန်လက်စုံမိုးပြီးဦးစိတ္တနှုတ်မှဟောကြားမယ့်တရားကိုနာယူဘို့အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ…… အဝေးကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်ဦးစိတ္တနှုတ်မှသူ့ဘ၀သူ့အကြောင်းကိုတဖြေးဖြေးချင်းဖွင့်ဟလာပါတယ်……
တစ်အုပ်လုံးကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူရမ်းကားကိုကျုပ်တို့ဆုံးမလိုက်မိတာ ကျုပ်တို့အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်…..ထောင်ပိုင်ကြီးက ကျုပ်တို့ကိုဆုံးမပါတယ်…..စည်းကမ်းဘောင်ထဲကတိုင်လို့ရရက်သားနဲ့ဘာလို့ဥပဒေမဲ့လုပ်ကြတာလဲတဲ့………
ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူး။ လူ့စည်းကမ်းနားမလည်တဲ့ကောင်ကို ဆုံးမဘို့ဘောင်အပြင်ကနှိပ်ကွပ်ဘို့ဘဲရှိတယ်…
ကြတာ….. ကျနော်သတိမလစ်ခင်လေးမှာမြင်ရခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဟာ စိတ်ထဲမှာလူသတ်ချင်စိတ်ပိုပြီးပေါက်သွားပါတယ်…..
ကုလားကြီးကိုချုပ် ခေါင်းကိုအ၀တ်နဲ့စွတ်ပြီး ၀ိုင်းသမကြတာ၊ပုဆိုးကျွတ်ပြီးဂွေးတန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါင်ကြား
ကိုပြေးကန်တဲ့ကောင်လည်းရှိသေးတယ်။ကျနော်ကိုလည်း မျက်နှာကိုအ၀တ်အုတ်ပြီး ၀ိုင်းဆွမ်းကြီးလောင်းကြတာ….
ထောင်သားတွေ ပါးစပ်ထဲမှာ ဆွမ်းကြီးလောင်းတာကိုမြိန်ရေရှက်ရေပြောလေ့ရှိတယ်…….ကျနော်သတိမရတစ်ချက်ရတစ်ချက် အချိန်မှာ ဘေးကထောင်သားတွေဆွမ်းကြီးလောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုအားရပါးရပြောသံကြားလိုက်မိပါတယ် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဆွမ်းကြီးလောင်းတယ်ဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်….ကျနော့်ကိုဝိုင်းထိုး ကြိတ်ကန်ကျောက်နေတာဟာ ကောင်းမှု ကုသိုလ် ပြုနေတာမဟုတ်ပါ….ဆွမ်းကြီးလောင်းတာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဟာမနှိုင်းကောင်းသော မနှိုင်းအပ်သောစကားဖြစ်ပါတယ်….
ပြောရရင် ခွေးပါးစပ်ကနတ်စကား ထွက်သလိုပါဘဲ……
ကုလားကြီး နဲ့ ကျနော်အဆောင်မတူတော့ဘူး၊ အရင်အဆောင်က အများစုဟာစာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ၊ စကားပြောကြရင်း လေ့လာမှတ်သားစရာအများကြီးသိခဲ့ရတယ်……
အခုကျုပ်ရောက်တဲ့အုပ်စုက နှစ်ကြီးသမားတွေ အများစုဟာစာမတတ်ကြဘူး…..ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘာမှမသိကြဘူး ကျုပ်လိုဘဲ…..ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကပညာတတ်……..
ကျုပ်အမျိုးသမီး ယူပေးခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဘဲနေ့နေ့ညညဖတ်နေလိုက်တယ် ဒီကောင်တွေကို စာအုပ်ပေးဖတ်တယ်။ စာမတတ်လို့လားမသိ…စိတ်မ၀င်စားကြဘူး…။
စရိုက်မတူတဲ့လူတွေကြားထဲမှာ ပထမဆုံးအပြင်ကိုတမ်းတလာမိတယ်။ လွတ်ရက်ကိုမျှော်လာမိတယ်……
ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အသုဘအိမ်၊သင်းချိုင်းကုန်းကပြန်လာခဲ့ရင် တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သန့်စင်လေ့ရှိကြ
အခုကျုပ်ထောင်ကလွတ်လာတာ အမိုးတို့ဆီမှာမအိပ်တော့ဘူး။ တစ်ခါတည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးဘုန်းကြီး
၀တ်လိုက်တယ်….. ကျုပ်ကိုယ်ပေါ်ကအညစ်အကြေးတွေကိုတရားဓမ္မနဲ့ ချွတ်ရအုံးမယ် …… နောက်ပြီးကျုပ်ဘ၀ပဉ္ဇင်းမတက်ရ သေးဘူး…….ထောင်အနံ့အသက်စွဲနေတဲ့ကျနော့်ကိုကျနော်မသတီဘူး…..
ကျနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်….ကျနော်တို့ထောင်သားအားလုံးဟာ လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေကြောင့် ထောင်ထဲ ရောက်ခဲ့ရတာ ။ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တွေကိုသာတားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုဖြစ်မယ်မထင်ဘူး ဒါပေမယ့် လူ့လောကကြီးထဲမှာ ဘုန်းကြီးတွေတောင် လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ ရှိနေသေးရင် ကျနော်တို့လူသားတွေအတွက်အရမ်းခက်ခဲလှပါတယ်……
တစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ နဲ့ လုံးထွေးနေကြတဲ့လူသားချင်းအတူတူ ဘာလို့ကျနော်တို့က ထောင်ကျရလဲ… ကံ၊ အတိတ်ကံကြောင့်ဘဲလို့ထင်တယ်၊ ကံနှင့် ကံအကျိုးပေးကောင်းရန် ဒါနသီလ ဘာဝနာ နေ့စဉ်ပြုလုပ် ရမယ်လို့ ဖတ်ဖူး ထားတယ်…..
ထောင်ထဲမှာဝဋ်လည်ခဲ့သမျှ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအတိုးချစိတ်အေးလက်အေးနားနေလိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော် ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးနားနေတာ……သင်္ကန်းရုံပြီးခေါင်းရိတ်ထားတာဘဲရှိသေးတယ်…. ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါ…. မသိတာလဲပါတယ်… နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအမိုး၊ သားဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကို သင်္ကန်းစီး ထားလို့ လာပြီး ဦးချနေတယ်…..
နဲနဲကြာလာတော့ကျနော့်စိတ်ကျနော်မလုံတော့ပါ။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့ကျနော့်ကိုလာရှိခိုး
နေတာ မြင်ပြီး ကျနော်တာဝန်မကျေသလိုခံစားရလာပါတယ်…..
ကျနော်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကစာသင်တိုက်စာသင်သားတွေ၊ စာချပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အများကြီးကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ၊
ဒါဆိုစာချပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းမလား……ပိုပြီးဆိုးပါတယ်……ဓမ္မာစရိယအောင်ပြီးမှစာချပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာ….ပထမငယ်တန်း မှဓမ္မာစရိယ အောင်တဲ့အထိအနည်းဆုံးခြောက်နှစ်ကြာအုံးမယ်…..ဒါလဲမဖြစ်သေးပါ….
သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့တာဝန်တစ်ခုခုယူဘို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားမိတာပါ…မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ကြည့်လိုက်တာသုံးမျိုးသုံးစားတွေ့လိုက်ရပါတယ်….. ကျနော်ဘာသာရေးအားနည်းတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်မှာ မှားချင်လဲမှားပါ မယ်…….။
ပထမဆုံးဘုန်းကြီးကျောင်းကစာသင်တိုက်၊ဒုတိယ ၀ိပသနာတရားစခန်းရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း၊တတိယဘုန်းကြီးကျောင်း က စာသင်တိုက်လည်းမဟုတ်၊ တရားစခန်းလည်းမလုပ်တဲ့ကျောင်း…..ဘယ်လိုမျိုး သတ်မှတ်ထားကြလဲ ဆိုတာကျနော့် ဥာဏ်နဲ့ လိုက်မမှီဘူး..။
ထောင်မှာနေလာခဲ့ကတည်းကတရားရိပ်အေးချမ်းတာကိုမြင်လာခဲ့ပါတယ်….လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တွေ ဖုံးလွမ်းနေတဲ့ လူ့လောကကြီးကိုကျနော်ပြန်မ၀င်တော့ပါ…တရားရိပ်ခိုလှုံတော့မယ်ဆိုရင်မိမိတတ်နိုင်သမျှနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို အလုပ်အကျွေး ပြုနိုင်မှသင့်တော်မယ်….
၀ိပဿနာကို ကျင့်ကြံမလား၊ ဒါဆိုဆရာကောင်းလိုလာပြီးလမ်းညွန် သင်ပြပေးနိုင်မည့်ဆရာကောင်းကိုကျနော်ရှာရမယ်….
အဖေနေပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချိန် စိတ်လေလေနဲ့ ရန်ကုန်ကိုဆင်းလားခဲ့ပါတယ်၊စိတ်ထဲမှာဘာလုပ်ရကောင်းမှန်း မသိ သေးပါ……
ရန်ကုန်မှာဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နေနေရင် တစ်ရက်မှာကျနော်တို့ထက်ဘူမိဗေဒမှာစီနီယာကျတဲ့ ကိုဂျစ်နဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း သူ့ရုံးခန်းမှာဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်…..စကားပြောကြရင်အမှတ်မထင်စကားတစ်ခွန်းကိုကျနော်စိတ်ဝင်စားသွားပါ တယ်၊ကျနော်တို့ကျောင်းတက်တုန်းကမာစတာတန်းတက်နေတဲ့ဆရာဦးမြင့်လွင်တစ်ယောက်သန့်တည်ပွားအဖွဲ့နဲ့အတူဗုဒ္ဓဘာသာ အနှစ်ချုပ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေတယ်ဆိုတာပါဘဲ….ကျနော်စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်……ကိုဂျစ်ကျနော့်ကိုဆရာဦးမြင့်လွင်ရှိတဲ့ ခြောက်မိုင်ခွဲက Noble light ကိုခေါ်သွားပါတယ်။
အဖြူရောင်ရှပ်လက်ရှည် ယောဂီပုဆိုးနဲ့ ဆရာဦးမြင့်လွင်သူ့ရဲ့ယောဂီတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးနေပါတယ်…..
ဆရာဦးမြင့်လွင်ဟာစိတ်အားထက်သန်စွာဗုဒ္ဓအနှစ်ချုပ်အကြောင်းကိုရှင်းပြနေပါတယ်…..ကျနော်အနောက်ဘက်နားမှာထိုင်ပြီး နားထောင်နေမိပါတယ်…..ဆရာဦးမြင့်လွင်ရှင်းပြပြီးတော့ယောဂီတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြပါတယ်…..ကျနော်က နားထောင် သက်သက်၊ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်အားနည်းနေမှန်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သိလာပါတယ်…….ဆယ်မိနစ်နားပြီးနာရီဝက် တရားထိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်…..
ဝေဒနာတွေက တက်လာမှာဘဲ၊ဝေဒနာတက်လာရင် ၀င်လေထွက်လေပြင်းပြင်းရှုပြီးထိန်းရမယ်၊ဝေဒနာတက်သလို အသက်ရှုတာလဲပြင်းလာရမယ်၊ဝေဒနာလျှော့လာရင်အသက်ရှုတာလဲပြန်လျော့ပေးရမယ်…အသက်ရှုနှုန်းသိပ်နှေးသွားရင်လူဟာ အိပ်ငိုက်သလိုဖြစ်သွားမယ် ဒီလိုလဲမဖြစ်စေရဘူး၊ ပုံမှန်လေးဘဲဝင်လေထွက်လေနဲ့မှတ်နေရမယ်…..ဆရာဦးမြင့်လွင် ကျနော့်ကို တရားမှတ်နည်းပြောပြနေပါတယ်….
လူတွေရဲ့အပြောတွေကြောင့် ဝေဒနာကိုမကြောက်ပါနဲ့….မခက်ခဲ့ပါဘူး…..ဝေဒနာတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ ဆရာ ယုံကြည်တယ်….ကဲ…ညီလေးကျိုးစားပြီးတရားရှာကြည့်တာပေါ့….။ညီလေးဘေးမှာဆရာရှိနေတယ်။ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မလိုဘူး…..
လက်တွေ့ပြပေးတဲ့ဆရာဦးမြင့်လွင်ကြောင့်အားတက်လာပါတယ်….ဆရာဟောပြောသလို ဝေဒနာကို ကျော်ကြည့်ချင်နေတယ်….
ကျနော့်စိတ်တွေအဆက်မပြတ်ပြန့်လွင့်နေတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်လိုက်၊တောင်ငူရောက်လိုက်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်လိုက်၊ အင်းစိန်ထောင်ရောက်လိုက်စိတ်တွေကိုပြန်ဖမ်းပြီးနှာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့လေဆီကိုပို့ထားလိုက်ပါတယ်……
မကြာပါဘူး ကျောကအောင့်သလိုလို၊ဖင်ကနာသလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်၊ နာတာကိုမေ့ထားလိုက်ပြီ ၀င်လေထွက်လေကိုဘဲ မှတ်နေလိုက်ပါတယ်….နာတာကလျော့မသွားတဲ့အပြင်ဟိုနားဒီနားတစ်ကိုယ်လုံးဖြစ်လာပါတယ်…..ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းရှုနှုန်း တင်မှဖြစ်တော့မယ် ရှုနှုန်းတင်ပေမယ့်လည်းဝေဒနာတွေမလျော့ပါ ပိုပိုပြီးဆိုးလာပါတယ်….
ဖင်ကနာ၊ခေါင်းကနာ၊လက်ကယား၊ကျောကအောင့်၊ 96 ပါးဝေဒနာတွေ ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာလာစုနေသလိုဘဲ…..
ဝေဒနာတက်နေသလိုအသက်ရှုနှုန်းကိုလည်းထပ်တင်လိုက်ပါပြန်တယ် …. နာရင်ထပ်တင်၊ ကိုယ့်အသက်ရှုသံ
ကျနော်အားတက်လာပြီ၊ဝေဒနာတွေကို ကျနော်မကြောက်တော့ပါ ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်မှာဘဲ …… ကျနော်ဒီနေ့အရမ်း ပျော်နေတယ်…. တစ်ခါမှတရားမမှတ်ဘူးဘဲနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ ဝေဒနာကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်နေပါတယ်…….
ဝေဒနာတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးဧချမ်းသွားသောအရသာကိုကျနော်အရမ်းကျေနပ်နေမိပါတယ်….ဘာသာရေးကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ ဝေဒနာကိုကျော်လွားနိုင်ခဲ့တာကိုကျနော်အရမ်းအံ့သြနေပါတယ်….အိမ်မက်ထဲမှာဝေဒနာအလွန်ဧချမ်းသောခံစားမှုနဲ့အတူ နတ်ပြည်တက်သွားတယ်လို့မက်နေမိတယ်…..
နောက်ဆုံးဝေဒနာအလွန်ခံစားမှုမျိုးပြန်ခံစားရန် ကျနော် Noble Light ကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဝေဒနာကိုထိမ်းရန်ရှုရှိုက် လေပြင်းပြင်းနဲ့ချိုးထားရသည်။ထိုကြောင့်ဝေဒနာမတက်လာစေရန်စကတည်းကလေပြင်းပြင်းရှု၍ဝေဒနာအတက်ကိုစောင့်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီဝေဒနာမတက်လာတော့ပါ၊ဒီနေ့အဘို့ဝေဒနာအလွန်ခံစားမှုမျိုးမခံစားလိုက်ရပါ၊ဝေဒနာလည်းမတက်လာ၊အူလည်လည်နဲ့
နောက်နေ့ အသက်ရှုတာလျော့ပြီး ဝေဒနာကိုစောင့်နေမိပါတယ်…..အသက်ရှုနှုန်း လျော့သွားသောကြောင့် ကျနော်
ဆရာဦးမြင့်လွင်က ၀ိပဿနာ အတွက်ထားရမယ့်စိတ်ကိုပြန်ညွန်ပြပေးပါတယ်….ဝေဒနာအလွန်ဧငြိမ်းချမ်းသော ခံစားမှုမျိုးကို လိုချင်စွဲလမ်းနေသောစိတ်နဲ့မရှုမှတ်ရဘူး……စွဲလမ်းမှုဆိုတာတဏှာကိုခေါ်တာ၊ တဏှာကိုပယ်ရမယ်……..
မဟုတ်ဘူး…. ဝေဒနာဖြစ်တဲ့သဘောကို သိအောင်မှတ်တာ……
ကျနော်ဟာဖြစ်ပျက်ရှုမှတ်နေတာထက် ဝေဒနာကိုအဓိကထားနေတာ။ ကျနော်မှားနေပြီ ၊ ဆရာဦးမြင့်လွင်ပြပေးတဲ့
လူ့လောကကြီးထဲမှာ ကိလေသာ ၊ တဏှာနဲ့ရောထွေးနေသမျှ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံနေအုံးမယ် ၊ ၀ိပဿနာဆိုတာ
ကိလေသာကိုမောင်းထုတ်တာဘဲ…..၀ိပဿနာရှုတာများလာရင်သမာဓိအားပိုကောင်းလာမယ်……သမာဓိအားကောင်းလာရင် ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးအချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်လာမယ်….ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်ရန်အတွက်မဂ်ဖိုလ်တရားထူး ရဘို့ ၀ိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်၊
ကျနော်ဆရာဦးမြင့်လွင်တို့အနားက အဆောင်ကိုပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ နေ့တိုင်းဆရာဦးမြင့်လွင်ညွန်ပြတာ တွေကို လေ့လာမှတ်သားနေခဲ့ပါတယ်….နေ့စဉ်နေ့တိုင်းယောဂီအယောက် ငါးဆယ်ခြောက်ဆယ်လောက်ညနေ ဘက်မှာ တရားမှတ်လေ့ ရှိပါတယ်…..
ကျနော့်ဘ၀ဟာတဖြေးဖြေးဧချမ်းစပြုလာပါပြီ။ ဆရာဦးမြင့်လွင်ကို ကျနော်အားကျပြီး ကျနော်ညစာ မစားတော့ပါ။ ဆရာညစာမစားတာနှစ်အတော်ကြာနေခဲ့ပြီ……..
ဆရာဦးမြင့်လွင်ညွန်ပြမှုကြောင့် ကျနော် ဗုဒ္ဓ သာသနာ အနှစ်ချုပ်နဲ့ အဆုံးအမတွေကိုသိလာခဲ့ရပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ နေစဉ် ဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့တရားစာအုပ်အများအပြားဖတ်နေပေမယ့်လည်းဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ပတ်သက် ပြီးယောင်ဝါးဝါး အဆင့်သာ ရှိခဲ့ပါတယ်….
ဆရာရှင်းပြပေးခဲ့လို့ ဗုဒ္ဓသာသနာအနှစ်ချုပ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိခဲ့ရပါတယ်….ဆရာဟာ ဘူမိဗေဒ အတန်းမှာ
စာရှင်းပြတာ တော်သလို ဘာသာရေးမှာလည်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်အောင်ရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိတယ် ကျနော်အရမ်းလေးစား မိပါတယ်……
သစ္စာလေးပါး ဟာ ဗုဒ္ဓသာသနာ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်တယ်…….
ဒုက္ခသစ္စာ - ဆင်းရဲခြင်း
သမုဒယသစ္စာ - ဒုက္ခ သစ္စာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရား - လောဘ
နိရောဓသစ္စာ - ဒုက္ခ သမုဒယ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း -နိဗ္ဗာန်
မဂ္ဂ သစ္စာ - နိရောဓသို့ဆိုက်ရန်ပွားသောမဂ္ဂ ရှစ်ပါးအကျင့်
မဂ္ဂ ရှစ်ပါး ကိုရှုံ့လျှင် သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ဆိုသောသိက္ခာသုံးပါးရတယ်။ကျန်သိက္ခာသုံးပါးကိုချုံ့လျှင်သတိ တစ်လုံးသာ ကျန်တော့သည်။
ဗုဒ္ဓ သာသနာ အဆုံးအမ သုံးရပ်ရှိသည်။ လက်တွေ့ကျသောအဆုံးအမနှစ်ရပ်က ပရိယတ္တိသာသနာ(စာသင်ကြားခြင်း) ပဋိပတ္တိသာသနာ (မိမိ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ မိမိညာဏ်ဖြင့်ရှုမှတ် ပွားများလေ့ကျင့်ခြင်း) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်……
ဗုဒ္ဓသာသနာသည်သန့်ရှင်းပါမှ တည်တံ့ပြီး၊တည်တံ့ပြီးမှသာလျှင် ပြန့်ပွားနိုင်မည်….. (သန့်၊တည်၊ပွား) ဆရာ့ခံယူချက်ကို ကျနော်လေးစားတယ်၊ဆရာ့လိုကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးဘာသာ ၊သာဿနာအတွက် ဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျနော်မတွေ့ဘူးပါ….. ကျနော်ဟာဆရာ့ဆီက လေ့လာ သင်ယူစရာတွေကိုသင်ယူနေရင်းဆရာ့ကိုလည်း ဘာသာရေးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်…..
ဆရာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အသုဘရှုအခမ်းအနား၊ကျင်းပဘို့အမြဲတိုက်တွန်းလေ့ရှိတယ်၊မွတ်စလင်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေရဲ့ အသုဘရှု အခမ်းအနားတွေဟာအတုယူဘို့ကောင်းတယ်၊အားလုံးစနစ်တကျ ရပ်ပြီး တစ်ယောက်ချင်း သေတဲ့အလောင်းကိုရှုကြတယ်….
ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မသာတစ်ခေါက်ကျောင်းဆယ်ခေါက်လို့ပြောနေကြပေမယ့်လည်းရေဝေးနဲ့ ထိန်ပင်မှာ အသုဘပို့ကြတဲ့သူတွေအနောက်ဘက်မှာထိုင်ပြီးစကားတွေများနေပြီးအသုဘကိုမကြည့်ဘဲပြန်သွားကြတဲ့သူတွေအများကြီး…
အသုဘရှုအခမ်းအနားဟာ အသုဘအလောင်းကိုပရိတ်သတ်အားလုံးမှ စီတန်းပြီးသံဝေဂညာဏ်ရရှိစေရန် အသုဘရှုခြင်း ဖြစ်တယ်…..
ကျနော်မြင်သမျှပြောရရင် ဒီအသုဘရှုတဲ့အစီစဉ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာစိတ်မပါတာလား၊ စိတ်မ၀င်စားတာလား၊ လုပ်တာမတွေ့မိဘူး….အသုဘရှုအစီအစဉ်တွေကိုအကြိမ်ရေနဲနဲဘဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်……လူတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီး ဆရာတော်တော်စိတ်ပျက်သွားပါတယ်…..
နှစ်တွေကြာလာတော့ ဆရာဆီကပညာတွေ ရသင့်သလောက်ရခဲ့တယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ဘာသာ၊ သာသနာအတွက်
အများကြီးလိုအပ်နေပါသေးတယ်၊ကျနော်စိတ်ထဲမှာဆရာဦးမြင့်လွင်ကိုတစ်ဖက်တလမ်းကကူညီတဲ့အနေနဲ့တောပြန်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတိုးတက်အောင် လုပ်ချင်နေတာ၊ဆရာလို ဥာဏ်မမှီသော်လည်းတတ်စွမ်းတာ လေးနဲ့လုပ်ချင်နေတယ်၊ ဆရာ့ဆီမှာ ခွင့်တောင်းပြီး တောင်ငူပြန်ခဲ့တယ်…….
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ လောဘ ၊ဒေါသ၊မောဟ၊တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့ လူ့လောကကြီးကိုပြန်မ၀င်ချင်တော့ပါဘူး။ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက်ကျနော့်ဘ၀ကိုပေးအပ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်၊လူ့ဝတ်နဲ့နေနေသမျှသံယောဇဉ်တွေ လာပတ်သက် နေအုံးမှာဘဲ…….
ကျနော်သံယောဇဉ်တွေကိုဖြတ်ပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်…. အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတစ်ပတ်ကျော်တဲ့
အရင်ကတည်းက ၀တ္တရားမကျေခဲ့တဲ့ သားမိုက်ရဲ့စကားကိုကြားရင် ဘာပြောကြမလဲ ၊ တာဝန်မယူချင်လို့လား…. အချောင်ခိုချင် လို့လား….
ဒီစိတ်တွေ ကျနော့် ကိုယ်ထဲမှာ မရှိပါ။ ဘုရားသာသနာနဲ့ ကြုံနေခိုက် ကိုယ့်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိအောင် ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ချင်တယ်။သင်ပေးချင်တယ်…..ဆင်းရဲလွတ်မြောက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘို့ သတိပဌာန်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ခြင်း ဟာအကောင်းဆုံးအလုပ်ဘဲ……။
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ သာသနာ၏
ရှေးခါ ဘိုးဘ လက်ထက်ကပင်
ကျနော့်မိဘတွေကိုအရင်အသိပေးလိုက်ပါတယ်၊ အမိုးကခဏတဖြုတ်ဝတ်မယ်ထင်နေတာ ၊ ကျနော်က တသက်လုံး ၀တ်မယ် ဆိုတော့ ငိုပါတော့တယ် ၊ သူ့မြေးလေးတွေကို သနားလို့တဲ့ ၊ အဖေက ကျနော်ပြောတာကိုမယုံလို့လား မသိဝတ်ကြည့်ပေါ့ တဲ့…..
ကျနော့် အမျိုးသမီး မနော်ကိုပြောပြဘို့ ၀န်အလေးဆုံးပါဘဲ ၊ အရင်ကတည်းက လင်ဝတ္တရားမကျေခဲ့ဘူး။ သားနဲ့ သမီးအပေါ် ၀တ္တရားမကျေခဲ့ဘူး ၊ သူလည်းခဏဘဲ ၀တ်မယ်ထင်ပြီ ၀တ်ခွင့်ပြုပါတယ်…..ဒါပေမယ့် ကျနော်ကအစီအစဉ်တွေကို ပြောပြတော့ မနော်လန့်သွားရှာပါတယ်…..
ကျနော်လူကြီးတွေအားလုံးရှေ့ ကွာရှင်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးမယ် ဆိုတော့ ကျနော်တစ်အိမ်သားလုံးထိတ်လန့်ကုန် ပါတယ်…..ကျနော်အားလုံးကိုသံယောဇဉ်ဖြတ်တော့မယ်…..မနော်ငိုယိုပြီးဘုန်းကြီးမ၀တ်ဘို့တားပါတယ်….ဒုလ္လဘ ၀တ်ချင်ဝတ်ပါ ၊ လူပြန်ထွက်ပြီးရင် အမိုးတို့ခြံမှာသူဝိုင်းကူလုပ်ပေးမယ်၊ကျနော်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ ငိုပြီးတောင်းပန်ရှာပါတယ်…….
ကျနော့်ရင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ၊နောက်မဆုတ်တော့ပါ၊ကွာရှင်းစာချုပ်မှာကျနော် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်၊မနော် ကျနော့်ကို စိတ်လဲဆိုး၊ပြောလဲပြော၊ငိုလဲငို…..ရန်ကုန်မှာရှင်ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက ကျမတို့သားအမိကို ရှင်ပစ်ထား ခဲ့တယ်….
ရှင်…အင်းစိန်ထောင်မှာဒုက္ခရောက်တုန်းက ကျမ ရှင့်ကိုအမြဲအားပေးခဲ့တယ်…..
ရှင့်ဆရာဆီမှာတပည့်ခံနေတုန်းကလည်း ကျမတို့ကို သတိမရခဲ့ဘူး၊ရှင်ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက်
ရှင့်အပေါ်ကျမတာဝန်ကျေခဲ့တယ်……သားသမီးတွေအပေါ်ရှင်ဂရုမစိုက်ခဲ့လည်း ကျမဘဲ ဖခင်တာဝန်ရော၊
အခုလဲ အားလုံးကိုစွန့်ပြီး ကျမကိုတစ်ခုလပ်ဘ၀ကိုပို့လိုက်ပြန်ပြီ……
ရှင်အစကတည်းက ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုရင် ဘာလို့ ကျမကိုယူတာလဲ…….
သားကိုသခင်၊လင်ကိုဘုရားလို့ မှတ်ယူထားသောမယားတောသူရဲ့ရင်ထဲ ပေါက်ကွဲမှုတွေဟာ အလွန်ပြင်းထန်လှပါတယ်…
ရှင့်ကိုပါရမီဖြည့်ပေးရအောင် ကျမ.. ယသော်ဓရာ လဲမဟုတ်ဘူး…… အကုသိုလ်များနေတဲ့ ရှင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး……
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော် အကုသိုလ်များတဲ့ကောင်ပါ…..
သေးပါ ၊ ကျနော့်မှာအကုသိုလ်များနေတာကိုသိသောကြောင့်ဒီဘာသာရေးဘက်ကိုရောက်ခဲ့ရတာပါ…..
အကုသိုလ်များနေသော သူတွေဘာသာရေးကို ပစ်ပယ်ရတော့မှာလား ….. ကျနော့်ဝဋ်ကြွေးတွေကို ဘာသာရေးနဲ့
တစ်ချိန်က မူးယစ်ဆေး၊မော်ဒယ်တစ်အုပ်၊ငွေကိုရေလိုသုံးနေတဲ့အချိန်ကို စိတ်အချမ်းသာဆုံး နိဗ္ဗာန်လို့ထင်ခဲ့တယ် ……ကျနော်ဟာငရဲပန်းကို မှ ပဉ္စူသကနတ်ပန်းလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်……ကျနော်ငရဲပန်းကို မြတ်မြတ်တနိုးနိုးနဲ့ ရှိုက်နမ်းခဲ့တုန်းက ဘယ်သူမှမတားခဲ့ကြဘူး။ အခုသာသနာဘောင်ထဲကိုအပြီးဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ ၀ိုင်းပြီး တား နေကြတယ်….
ကျနော်လိုအကုသိုလ်များနေတဲ့ကောင်လုပ်ရမှာ ကျင့်ရမှာက ၀ိပဿနာရှုရမှာ၊ဒါမှအပယ် ပိတ်မှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ လူတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ၀ိပဿနာရှုနည်းသင်ပေးမည်၊ကိုယ်တိုင်လည်းရှုမည်၊ဖြစ်တာ မဖြစ်တာ အနတ္တ၊လုပ်ရမှာ ကကိုယ့်တာဝန်……
တစ်ရက်ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိမပေးဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ပါတယ်……ကျနော့်ဘွဲ့နာမည်က ဦးစိတ္တ နဲ့ ဘ၀သစ်စပြီ……
ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကကျနော်နေဘို့နဲ့ ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင် စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ကျနော်ပထမ ဘုန်းကြီးကျောင်းကဒကာ ဒကာမတွေကို စည်းရုံးတယ်၊နောက်တော့ရွာထဲက လူကြီးတွေကို တရားချတယ်၊ဒီလိုနဲ့ လူတွေကိုတဖြေးဖြေးချင်းတရားချတယ်…..
တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျနော့်ကျောင်းဆောင်မှာ ယောဂီတွေတိုးလာပါတယ်။ ကျနော့်ဘ၀တဖြေးဖြေးနဲ့နေ သားကျလာပါပြီ….
သင်္ကန်းရုံပြီး ဘုရားသားတော်အဖြစ်နဲ့ သာသနာ့တာဝန်ကိုထမ်းနေရတာကျေနပ်မိပါတယ်…..လူသားတွေအပါယ်တံခါးပိတ်အောင် တတ်သမျှလေးနဲ့ ကျနော်ကူညီပါရစေ……
ကျနော်နောက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းပြောပါရစေ…….အဆိုးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ အကောင်းဆုံးကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်……..ကျနော်ဟာဘူမိဗေဒကိုရောက်ခဲ့လို့ဒီသူငယ်ချင်းတွေ၊ဒီဆရာတွေ၊ဘာသာရေးမှာလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ ဘူမိဗေဒဆရာဦးမြင့်လွင်နဲ့ ဆုံခဲ့ရတာပါ ၊ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဘူမိဗေဒဌာနဖြစ်တဲ့ မန္တလေးဆောင်ကြီးကို အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင် နေမှာပါ ……..မန္တလေးဆောင်ကြီးကိုအမြဲသတိရနေမှာပါ……..
ကျောင်းဝင်းထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ ရင်ထဲမှာဧချမ်းသွားသလိုမျိုးခံစားလိုက်ရပါတယ်…..တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် နေတယ်…..ဒါပေမယ့်ဓမ္မာရုံထဲမှာညီညာစွာစီတန်းထိုင်နေကြသောယောဂီများရှိနေတယ်။ အားလုံးဝိပဿနာရှုနေကြတယ်….
ရှေ့မှာ ဆရာဦးမြင့်လွင် ၀ိပဿနာရှုနည်းကို သင်ပေးနေတယ်….ဆံပင်ရိတ်ထားပြီး အဖြူခြုံထည်ကိုသင်္ကန်းလိုလွှမ်းရုံထားပြီး အေးချမ်း တည်ငြိမ်စွာတရားပြနေသောဆရာဦးမြင့်လွင်ကိုမြင်ရသည်မှာ အလွန်အေးချမ်းလှပါတယ်…..
ဦးစိတ္တခေါ် သခွားသီးတို့ တောင်ငူမှရန်ကုန်အပြန် လှည်းကူးမှာဆင်းပြီးဆရာဦးမြင့်လွင်ဆီကိုဝင်ခဲ့တာပါ။ ငါးဆူတောင်5ရပ်ကွက်မှာရှိသော သန့်တည်ပွားတရားရိပ်သာကို ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားလေးကလိုက်ပို့ ပေးပါတယ်…… ဦးစိတ္တ ပြောလိုက်သောကြောင့်သန့်တည်ပွား တရားရိပ်သာကိုဝင်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်လာသောကြောင့်ဝင်ကြည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်…..
ရိပ်သာကလူတွေအားလုံးစကားကိုတိုးတိုးညင်သာစွာပြောပြီး လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွေ့လျှင် မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ကြ ပါတယ် …. တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် လဲပါမည် ၊ ဧချမ်းတည်ငြိမ်နေသော ယောဂီတွေကိုမြင်ရပြီး ရင်ထဲမှာ တစ်ခါမှမခံစားဖူးခဲ့သောခံစားမှုကိုခံစားနေရပါတယ်……
မိမိလည်း အကျိုးရှိ၊အများလည်း အကျိုးရှိ၊လောကီသာမက လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင် အောင်ညွန်ပြပေးနေသော ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်မြင့်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်…….
အပါယ်လေးပါးတွင် ပြိတ္တာ၊ငရဲ၊တိရစ္ဆာန်၊အသူရကယ်တို့ဟာအကျိုးတရားလေးပါးဖြစ်ပြီး အကြောင်းတရားလေးပါးလဲ ရှိပါတယ်….အကြောင်းရှိလို့အကျိုးတရားဖြစ်လာရတာပါ..။
ထိုအကြောင်းတရားတွေလုပ်နေသမျှအပယ်ဘေးကလွတ်မည်မဟုတ်......ဒီအကြောင်းတရားတွေပယ်ဖို့ ဒါန ၊ သီလ ၊ သမထ လောက်နဲ့မလွတ်နိုင်ပါ၊ထိုသုံးမျိုးလုပ်နေသမျှ ကံအကျိုးပေးသာရပြီး ကံလမ်းသာဖြစ်သည်။
၀ိပဿနာ ဘာဝနာက ဥာဏ်လမ်းဖြစ်ပြီးလုပ်သမျှတက်သည်။ဗုဒ္ဓ သာသနာဝင်အများစုသည် ဒါန ၊ သီလ ၊ သမထ ဘာဝနာ ကိုလုပ်ကြသည်၊၀ိပဿနာ နဲ့ နဲနဲ အလှမ်းဝေးနေသေးသည်။
ဒါနကို လူ့ပြည်မှနတ်ပြည်ထိ ပုံပြီးလှူ ၊ သီလကိုကြိုက်သလောက်ထိမ်း ၊ သမထကိုလည်း မြေလျှိုးမိုးပျံအောင်
ကြိုက်သလောက် ကျင့်ဒါတွေလုပ်လို့ အပါယ်လွတ်မယ်လို့ပြောရင် မှားပါလိမ့်မယ်…..
သူ့အကျိုးပေးရှိသရွေ့ အကျိုးပေးရနိုင်ပေမယ့် အပါယ်က မလွတ်နိုင်ပါ၊ဒါနသီလ သမထ သုံးမျိုးဟာ ဘုရားမပွင့်သော သာသနာမှာလည်းရှိသည် ၊ ဘာသာခြားများလည်းလုပ်နိုင်သည်။ဒါန၊သီလ၊သမထ ဟာ အခြေခံမျှသာဖြစ်သည် ။ ဤသုံးမျိုးကို အခြေခံပြီး ၀ိပဿနာကို လုပ်မှအပါယ်မှလွတ်မည်ဖြစ်သည်။
ကံအကျိုးပေးရှိသလောက် လူနတ် ဗြမ္မာ ချမ်းသာကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၊ ကုန်ပြီဆိုသည်နဲ့ ပြန်ဆင်းပြီး အပါယ်ရောက်မှာ ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ထိုသုံးမျိုးဟာအပါယ်တံခါးမပိတ်ပါ……..
၀ိပဿနာ ဘာဝနာပွားများခြင်းကြောင့်ရလာသောအကျိုးပေးဟာ ဘယ်တော့မှပြန်မကျဘဲလုပ်လေတက်လေ
ဖြစ်ပါသည်။ ဒါန၊သီလ၊သမထ ဟာ ပိုက်ဆံချမ်းသာခြင်းနဲ့တူသည်။ပိုက်ဆံကုန်လျှင်ဆင်းရဲသားပြန်ဖြစ်သလို မျိုး ဒါန၊သီလ၊သမထ အကျိုးပေးကုန်လျှင် အပါယ်သို့ပြန်ဆင်းသည်။
၀ိပဿနာဘာဝနာသည် ဥာဏ်ပညာနဲ့တူသည်။ ဘယ်တော့မှမကုန်ခမ်းနိုင်၊လုပ်လေ အကျိုးပေးရလေဖြစ်သောကြောင့် သောတာပတ္တိ မဂ်ဥာဏ်ရောက်သည်အထိ ၀ိပဿနာကျင့်ခြင်းဖြင့် အပါယ်မရောက်နိုင်တော့ပါ….
အပါယ်တံခါးပိတ်အောင်ဝိပဿနာ ဘာဝနာအကျင့်ကိုအမြန်ဆုံးကျင့်ကြရန် အထူးတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်…..
ထို့အတူ ဦးစိတ္တသည်လည်း မိမိအတွက် ၊အားလုံးအတွက် ကောင်းအောင် ညွန်ပြပေးနေပါသည်…….
ကုလားကြီးသည်လည်း လူအများကောင်းသော စိတ်တွေထားကြရန် ဟောကြားပေးနေသည်။ သူတို့အားလုံးဟာ မိမိအတွက် မဟုတ်ရင်တောင် အများအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်နေကြပြီ……
ဒါဆို ကျနော် ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ…..
အမေ့ကိုလည်း မကြည့်ရှုခဲ့ပါ ၊ မောင်နှမတွေကိုလည်း မထောက်ပံ့ခဲ့ပါ၊ကိုယ့်အတွက်လည်း ဘာမှမကျန်အောင် သုံးဖြုန်းပစ်ခဲ့တယ် ၊ လူအများအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်း ဘာမှမရှိ……. ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ်နွံထဲနစ်နေတဲ့ကျနော် ဟာဘာသာရေးနဲ့ဝေးဝေးနေသည်၊၊ အများအတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့သလို ကိုယ့်အတွက်လည်း နတ္ထိ ၊ မစင်ထဲကလောက်လိုမျိုး၊ ပိုးဖလံမျိုးမီးကိုတိုးသလိုမျိုး၊မီးလျှံထဲကိုတရွှေ့ရွှေ့နဲ့ရှေ့ဆက်တိုးနေဆဲ၊တိုးလတ္တံ့….ကျနော်…။
အသက်ကြီးပြီးအချိန်မစီးသော၊ မိုက်လုံးကြီးပြီးမိုက်တွင်းနက်နေဆဲကျနော်သည်တစ်ကယ်တော့ “ကြီးမိုက်” တစ်ကောင်ပါလား…